Taariikhda Colaadda IGAD iyo Eritrea Soomaaliya kaalin Intee Leeg Ayaa ku leedahay.
Taariikhda Colaadda IGAD iyo Eritrea Soomaaliya kaalin Intee Leeg Ayaa ku leedahay.
Friday September 14, 2018 - 10:50:34 in by Samiir Cabdi
Ka dib is baddelada gobolka ka dhacay, ayaa Eritrea si lama filaan ah waxay u noqotay waddan u furmay waddamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD, marka laga reebo Jabuuti, oo aysan weli gaarin heshiis rasmi ah.
Inkasta oo dib u dhac uu ku yimid, ku soo laabashada Eritrea ee xubinnimadeedii urur goboleedka IGAD ee la filayey in uu todobaadkan dhaco, sida uu qorshuhu ahaa, haddana waxaa hubaal ah inay wax weyn iska baddeleen sida gobolka looga arki jiray Eritrea.
Haddaba qormadan waxaan ku eegeynaa, taariikhda is qab-qabsiga ee Eritrea iyo urur goboleedka IGAD, oo ay u muuqato in danaha waddamada gobolka ay ka lahaayeen Soomaaliya ay ahayd sababta markeedi horeba keentay isku dhaca Eritrea iyo IGAD.
Ka bixitaanka Eritrea ee Ururka IGAD
Taariikhda markay ahayd 22 April 2007, ayay Eritrea ku dhawaaqday inay ka baxday urur Goboleedka IGAD, ka dib shir arrimaha Soomaaliya looga hadlayay oo si weyn ay isugu maandhaafeen Ethiopia iyo Eritrea.
Shirkaasi oo ay isugu yimaadeen wasiirada arimaha dibeda ee waddamada ku bohoobay IGAD waxaa uu ka dhacay Magaalada Nairobi ee Dalka kenya, waxayna wasiirrada u bateen, marka laga reebo Eritrea, inay Itoobiya ku taageereen ciidamada ay gelisay soomaaliya.
Wasiirkii Warfaafinta ee Eritrea ee xilligaasi Cali Cabdu ayaa sheegay markaasi "in ka bixitaanku uu yahay mid ku meel-gaar ah. Waxaan dareemeynaa in ay mas'uuliyad darro tahay in aan qeyb ka sii ahaanno urur goboleed qaadanayo go'aanno aan la aqbali karin marka laga eego dhanka sharciga" ayuu yiri.
Wasiirka ayaa intaasi ku daray in ururka uu noqday "mid ay ku adeegtaan xoogag shisheeye", isagoo si aan toos ahayn farta ugu muuqay dowladda Maraykanka.
Image caption11 sano ayey Eritrea ka maqan tahay ururka IGAD
Dadaalladii xigey ee dib-u-soo laabashada Eritrea
Sanad ka dib markii ay Eritrea ka baxday urur Goboleedka , ayaa bishii Agoosto 2008-da, wafdi ay hor kacayeen wasiirada arrimaha dibadda ee Kenya iyo Sudan waxay ka codsadeen Eritrea inay dib ugu soo laabato bahda IGAD.
Wafuudda iyo xoghaynta IGAD oo la socotay ayaa waxay la kulmeen Madaxwaynaha Eritrea Isaias Afwerki, waxayna kala hadleen in Eritrea ay dib uga laabato go'aankii ay qaadatay
Eritrea waxay ku eedeysay xubnaha kale ee IGAD inay ku tunteen xeerka u dejisan ururka oo ay taageereen in waddan uu ku duulo waddan kale oo madaxbanaan kana tirsan ururka. Eritrea ayaa gelitaankii Itoobiya ee Soomaaliya ku tilmaantay mid sharci darro ah.
Eritrea xilligaasi waxay dalbatay in la baddelo xeerka u yaallay IGAD, oo wafdigii wasiirrada ay ballanqaadeen inay eegi doonaan.
Danaha waddamada IGAD ee Soomaaliya
Itoobiya iyo Eritrea waxay xilligaasi kala taageerayeen dowladdi Madaxweyne Cabdullahi Yusuf iyo mucaaradkii xaruntoodu ahayd magaalada Asmara.
Arrintaasi ayaana sii kala fogeysay waddamada IGAD, waxaana xilligaasi labada dal lagu eedeynayay inay si dadban ay ugu dagaallamayeen Soomaaliya.
Image captionMeelaha labada dhinac ay ku muransan yihiin wacxaa ka mid ah jasaa'irka iyo buuraleyda Dumeira
Sanadkii 2009-ka, ayay Qaramada Midoobey soo saartay go'aan ay cunaqabateyn xagga hubka ah ku saarayso Eritrea, iyadoo lagu eedeeyay inay taageerto ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya, iyo inay diidday inay ka baxdo dhul ay Jabuuti ka qabsatay sannad ka hor xilligaasi.
Eritrea ayaa xilligaasi sheegtay in eedeymahaasi ay ahaayeen "beenabuur" ay "dhoodhoobeen" Maraykanka iyo Itoobiya.
Codsiga Eritrea ee IGAD
Sannadkii 2011-ka ayay Eritrea markii ugu horreysay codsatay inay dib ugu soo laabato urur goboleedka IGAD.
Xoghayaha Guud ee IGAD ayaa wareysi uu BBC-da siiyay codsigaas ka dib sheegay inay ka fiirsanayaan arrintaasi, oo Eritrea ay wajaheyso eedeymo culus oo ay ka mid yihiin inay taageerto argagixiso.
Dhowr sano oo cunaqabateyn iyo go'doon ah ka dib, Eritrea waxay u muuqatay inay liidatay, oo ay dooneysay inay xubinnimada urur goboleedka u adeegsato inay khafiifiso go'doonka haystay, balse way ku guuldareysatay arrintaasi.
Maanta xaalka waa uu ka duwan yahay sida uu ahaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay, balse waxaa Eritrea hor taagan hal caqabad oo ah tan Jabuuti.
In kastoo wafdi wasiirro ah ay dhawaan gaareen Jabuuti, oo ay muuqato yididiillo ah in la heshiinayo, ayaa haddana waxaan weli si rasmi ah heshiis u gaarin jabuuti iyo Eritrea, oo murakooda uu ku qotomo jasiiradda Dumeria ee ay laba dhinac ku muransan yihiin, imminkana ku jirta gacanta Eritrea.